ဖူးနုသစ်: ဒိုင်ကြောင်များနဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်း
“ငါတော့ စိတ်ညစ်ပါတယ်ဟယ်။ သေသာ သေချင်တော့တာပဲ။”
“လူတွေက ကောင်းကို မကောင်းပါဘူး ဝဏ္ဏရယ်။ ငါ့အကြောင်းကို ငါ့ကွယ်ရာမှာ မကောင်းပြောကြတယ်။”
“ဘာဖြစ်လဲဟ။ နင့်ရှေ့မှာ မပြောချင်လို့ နင့်နောက်မှာ ပြောတာပဲ။”
“နင်ကလဲ။ လုပ်ပြန်ပြီ။ ငါ့ကို လူတွေက အဲဒီလိုကြီး မြင်နေတော့ ဘယ်ကောင်းမလဲဟ။”
“နင်အသေအချာ စဉ်းစားကြည့်စမ်း။ လူတွေ နင့်ကို မကောင်းမြင်တယ် ထားဦး။ ဘယ်သူမှ နင့်ကို ၂၄ နာရီလုံး မကောင်းမြင် မနေနိုင်ဘူး။ နင့်မကောင်းကြောင်းကိုလည်း ၂၄ နာရီလုံး ထိုင်ပြော မနေနိုင်ဘူး။ မကောင်း မြင်တဲ့စိတ် ဆိုတာ သူတို့ စိတ်ထဲမှာ ခဏလေး ဖြစ်လာတဲ့စိတ်။ ခဏနေရင် ပျောက်သွားရော။ သူတို့ စိတ်ထဲ ခဏလေး ဖြစ်တဲ့ မကောင်းမြင်စိတ်အတွက် နင်က တချိန်လုံး တွေးပြီး စိတ်ညစ်နေတယ် ဆိုတာက မတန်ပါဘူးဟာ။ အဓိပ္ပါယ်လည်း မရှိပါဘူး။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် လုပ်စရာ ရှိတာ လုပ်စမ်းပါဟာ။”
“ဒါပေမယ့်ဟာ ငါ့အကြောင်း မကောင်းပြောတော့ ငါနာမည်ပျက်တာပေါ့ဟ။”
“ဒီမှာ။ နင်စဉ်းစားစမ်း။ နောင် အနှစ် ၁၀၀ဆိုရင် နင်လည်း ဒီကမ္ဘာမှာ ရှိတော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ ငါလည်း ဒီကမ္ဘာမှာ ရှိတော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ နင့်ကို မကောင်းပြောတဲ့သူတွေလည်း တစ်ယောက်မှ ဒီကမ္ဘာမှာ ရှိတော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ အကုန် မြေကြီးထဲ ရောက်နေပြီ။ နင့်ကို အခုလို မကောင်းပြောတဲ့ကိစ္စ လူတွေ သတိရဖို့ ဝေးလို့ နင်နဲ့ငါ့နာမည်ကိုတောင် သတိရတဲ့သူ ရှိရင် ကံကောင်းတယ်မှတ်။”
ဝဏ္ဏဆိုတာကတော့ ဆံပင်မဖြီးပဲ အဝတ်အစားကို ဖြစ်သလို ဝတ်တတ်တဲ့ အကောင်းမြင်သမား တစ်ယောက်ပါ။ အမြဲတမ်း ပြုံးနေတတ်ပြီး ဒိုင်ကြောင်တွေလည်း အမြဲလိုလို လွှတ်တတ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ ရည်းစားကတော့ သဘောကောင်းပေမယ့် အမြဲတမ်း အရာရာကို စိုးရိမ်ကြောင့်ကြ နေတတ်တဲ့ မိန်းကလေးပါ။ သူတို့နှစ်ယောက် အမြဲတမ်း အဲဒီလို စကားမျိုးတွေ ပြောတတ်ပါတယ်။
“ငါ စိတ်အရမ်း ညစ်နေတယ်ဟ။”
“မနက်ဖြန် စာမေးပွဲအတွက် ငါ စာတွေ သိပ်မရသေးဘူးဟ။ အမှတ်ကောင်းဖို့တော့ မလွယ်ပါဘူးဟယ်။”
“အော်။ ခက်ပြီ။ အကောင်းဆုံး ကြိုးစားပေါ့ဟာ။ စိတ်ပူစရာ မရှိပါဘူး။ ရချင်သလောက် ရပေစေပေါ့။ နင့်ကိုနင် ဘယ်လောက်ပိုင်သလဲ စဉ်းစားစမ်း။ လက်ဖျစ်တစ်တွတ်တောင် ပိုင်တာ မဟုတ်ဘူး။ သင်္ခါရ တရားအရ နင်နှာခေါင်းဖျားက ရှူလိုက်တဲ့လေ အဆုတ်ထဲ မရောက်ခင် နင် အသက်ပျောက်သွားနိုင်တယ်။ မမြဲတဲ့ သေရင် ကိုယ့်နောက်မပါမယ့် အရာတွေ အတွက် တွေးပြီး စိတ်ညစ် မနေစမ်းပါနဲ့ဟာ။”
“သူ့ဘဲနဲ့လေ ၄-၅ နှစ်တွဲလာပြီးမှ အခု ကွဲသွားကြပြီ။”
“အော်။ ဒါများ အဆန်းလုပ်လို့ဟာ။ အတွဲဆိုတာ ယူဖြစ်မှ လင်မယားဖြစ်တာပဲ။ အခုဟာက မယူခင် ကွဲကြတာပဲ။ ယူပြီးမှ ကွဲရင် တစ်ခုလပ် ဖြစ်နေဦးမယ်။ မယူသေးခင် ကတည်းက အဆင်မပြေတဲ့နောက် ယူပြီးရင် ဘယ်လို လုပ်ကြမှာလဲ။ ဒီ ၄-၅ နှစ်တောင်မှ အဆင်မပြေရင် နောက် အနှစ် ၄-၅၀ ဘယ်လို ပေါင်းကြမှာလဲ။ ဖြစ်တတ်ပါတယ်ဟာ။”
ဒီလိုနဲ့ ဝဏ္ဏရဲ့ ဒိုင်တွေ အမြဲတမ်း ကြားနေရတာမို့ သူနဲ့ တွဲပြီး နှစ်နည်းနည်းလေး ကြာလာတော့ ကောင်မလေးလည်း အခြေအနေ အတော်လေး တိုးတက်လာပါတယ်။ အရင်လို အမြဲတမ်း စိုးရိမ် မနေတတ် တော့ပဲ အကောင်းမြင်စိတ်တွေ ဝင်လာပါပြီ။ ဝဏ္ဏလည်း သူ့ရည်းစားရဲ့ တိုးတက်မှုတွေကို ကြည့်ရင်း သူ့ရဲ့ လက်ချာတွေ အောင်မြင်တယ်ဆိုပြီး သဘောကျနေပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ တစ်နေ့မှာပေါ့။
“ဟဲ့ ဝဏ္ဏ။ နင့်ကို ပြောစရာ ရှိတယ်။”
“နင်နဲ့ ငါနဲ့ ပြတ်ရအောင်ဟာ။”
“မနောက်ဘူး။ ငါအတည် ပြောနေတာ။ ငါနောက် ရည်းစားရနေပြီ။”
“နင်ကလည်းဟာ လုပ်ရက်တယ်။ ဒီလောက် နှစ်တွေ အကြာကြီး တွဲလာပြီးမှ။”
“ဘာဖြစ်လဲဟာ။ နင်နဲ့ငါ ယူမှ လင်မယားဖြစ်တာပဲ။ အခု သမီးရည်းစား ကတည်းက ကွဲကြတော့ တခုလပ် မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ဟာ။ နင်နဲ့ငါ အခု ၃-၄ နှစ် အဆင်မပြေရင် နောင် အနှစ် ၃-၄၀ ဘယ်လို ရှေ့ဆက်ကြမလဲ။”
“နင်နဲ့ ငါနဲ့ အကြောင်းကို လူတိုင်း သိနေတယ်ဟ။ နင် လူတွေကို ဘယ်လို မျက်နှာပြမှာလဲ။”
“ကိစ္စမရှိပါဘူးဟာ။ လူတွေ ငါတို့ အကြောင်းကို ၂၄ နာရီလုံး တွေးနေ ပြောနေနိုင်တာမှ မဟုတ်တာ။ နောက်ပြီး နောင် အနှစ်၁၀၀ ကျရင် အခုလို မကောင်းပြောတဲ့သူတွေ အားလုံး မြေကြီးထဲ ရောက်ကုန်ပြီဟ။ ငါ့နာမည်ကို မှတ်မိရင် ကံကောင်း။”
“တော်ပါတော့ဟာ။ ငါတော့ အတော် ညစ်သွားပြီ။”
“နင်ကလည်း စိတ်မညစ်စမ်းပါနဲ့။ နင့်ကိုယ်နင် လက်ဖျစ် တစ်တွတ်တောင် ပိုင်တာ မဟုတ်ဘူး။ နင် အသက်ရှူတာ မဆုံးခင် အသက်ပျောက်သွားနိုင်တယ်လေဟာ။ ငါ့ကိုလည်း နင်ပိုင်တာမှ မဟုတ်တာ။ မမြဲတဲ့ အရာတွေ အတွက် တွေးပြီး စိတ်ညစ်မနေစမ်းပါနဲ့။”
စကားအဆုံးမှာတော့ ဝဏ္ဏတစ်ယောက် ပါးစပ် အဟောင်းသားနဲ့ ရယ်ရမလို ငိုရမလိုပဲ ဖြစ်နေပါတယ်။
Posted by ZT at 10:53 PM
kaung ei, kaung ei :D
ဒီ ၄၊ ၅ နှစ်မှ အဆင်မပြေရင် နောက်အနှစ် ၄၊ ၅၀
ဖွတ်မီးနဲ့ ဖွတ်ပြန်ချည်... တာ ခံလိုက်ရသကိုး...
ဟဲဟဲ သိသမျှ စကားပုံတွေ နဲ့ လာပြီး လက်သရမ်းသွား သဗျို့
A similar short story. Quite funny!
Saya Za Wa Na translated it into Myanmar before.
Ko Aung-> ကျေးဇူးပဲ။ ကျွန်တော် အဲဒီဇာတ်လမ်းကို ရှာနေတာ ကြာပြီ။ တာရာမင်းဝေ ဘာသာပြန်တာ ဖတ်ဖူးပါတယ်။
အခု ဇာတ်လမ်းကတော့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း အားဖြင့် ဖြစ်ရပ်မှန်ပါ။ :D
အဲဒီ reason မဆိုးဘူး...မှတ်ထားမှ.. း)
ကောင်းတယ် မှတ်ထားဦးမှ ဟီး
ဒါဘူ့ဖြစ်ရပ်မှန်လဲ .. း))
ကောင်မလေး က တော်တာပေါ့နော်...
မိန်းကလေး များ အတုယူရန် သင့်
သူငယ်ချင်း အရင်းခေါက်ခေါက် တစ်ယောက်ရဲ့ ဇာတ်လမ်းပါ။ အတည့်အတိုင်း ရေးရင် သမ ခံရမှာမို့ နည်းနည်း လွှဲရေးထားတာပါ။ :D
ဖြစ်သင့်တဲ့ ဖြစ်တတ်တဲ့ ဇာတ်လမ်းပဲဗျ
ကိုZT သူငယ်ချင်းဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို encode လုပ်ထားတာလား။ ဟိုဘက်မှာ decode လုပ်လိုက်ရင်....ဟီး
ခွင့်ပြုရင် http://tales.lawshay.com မှာ ဖော်ပြပါရစေ။
ခွင့်ပြုတယ်ဆိုရင် lawshay@lawshay.com ကို အကြောင်းကြားစာလေး ပို့ပေးနော်။
ဒါထက် တဆင့်တက်လို့ တစ်ပင်လိမ်ဆိုတဲ့ နာမည်လေးပါ ပြောင်းပေးပါရစေ။
ဒါဆို သူတို့၂ယောက်ကြားမှာ ခိုင်မြဲတဲ့ အချစ်ဆိုတာမရှိလို့လား။
မဂွိစ် -> ထင်ချင်သလို ထင်ပါ။ :P
အယ် ကောင်းရော... ကိုယ့်စကားနဲ့ကိုယ်
ဟားးးးးဟာားးးးးးးး ဝါးလုံးကွဲမတတ် ရယ်သွားတယ် ကောင်းတယ ်ကိုယ့်ရှူးကိုယ်ပတ် ဆိုတာ ဒါမျိုးထင်တယ် ဟီးးးဟီးးးးဟိုးးးးးးဟိုးးးးးးး
ငို၍ရယ်၍ မရသောမျက်နှာ ဆိုတာ ဒါမျိုးဖြစ်မယ်
၃ ၄ နှစ် သင်ပြီးမှ အောင်လတ်မှတ်ပါ တန်းတောင်းတာကိုး အဖြစ်က။
မနှစ်က ကျောင်းကပွဲက စကားလေးတောင် ပြန်မြင်ယောင်တယ်
The duty of love is to listen တဲ့။
ဒီနှစ်လဲ နောက် အပတ်ထဲလာတော့မယ်ဗျ။
အကိုရေ..ငိုရမလိုလို ရယ်ရမလိုလိုနဲ့ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဘူးဖြစ်သွားတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အရာရာကို အကောင်းမြင်တတ်ဖို့နဲ့ သိပ်မရှည်ဖို ့လေး မှတ်သွားတယ်နော်။ဟိဟိ ကျေးဇူး ကမ္ဘာ။
ကိုယ့်ရှူးကိုယ်ပတ်။ မိုက်တယ်။ ဇာတ်လမ်းဆင်တာတော်တယ် ကို ZT ရေ။အနော့်ကို အုန်းနို့ခေါက်ဆွဲကျွေးသင့်တယ်နော်။ ပြီးတော့ အင်းစိန်မှာနေတယ်ပြောဘူးတယ်ဟုတ်စ်။ တမြေတည်းနေ တရေတည်းသောက်ကျွေးသင့်တာအမှန် :P
ဖတ်ပြီး ဘာပြောရ မှန်းမသိဘူး ဖြစ်သွားတယ်။
သနားရမလား။ ရယ်ပဲရယ်ရတော့မှာလား။ ကိုယ့်စကားနဲ့ ကိုယ့်ကိုပြန်ခံ သွားရတယ်... း)
ဦးဇက်တီတို့ကတော့ ရေးချက်က မိုက်တယ်
ko twe~ lar hinn?